Xarunta Konya YHT waxay u adeegi doontaa 3 milyan oo rakaab ah sanadkiiba | RayHaber | raillynews
HometareenkaKonya YHT Station waxay u adeegi doontaa rakaabkii 3 ee sanadkiiba
20 / 08 / 2017 tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
Konya YHT Station, oo ay soo saareen Raysal Wasaaraha Cusub, ayaa la filayaa in uu u adeego rakaabka 3 million qof sannadkiiba.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Tacliinta (TCDD) ee qoraalka qoraalka ah, Xarunta YHT iyo Kayacik Logistics Center, Ra'iisul wasaaraha Yildirim, Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badaha iyo Isgaadhsiinta Ahmet Arslan ayaa ka soo qaybgalay xaflad xusuusin ah.
Saldhigga, oo la filayo in uu u adeego rakaabka rakaabka 3 sannadkiiba, ayaa lagu dari doonaa mashruuca tareenka fudud ee degmada caasimadda ah ee Konya.
Xarunta Cusub ee Cusbada Cusub ee Cusub ee Konya, oo dhammaan noocyada qalabka bulshada iyo dhaqanka ee rakaabka ayaa ka dhici doona Konya Khamriga Suuqa, waxay Konya ka dhigaysaa saldhigga saadka ee Aasiya. Xarunta Qalabka Soomaliyeed ee Konya (Kayacık) ayaa lagu dhisayaa 1 Million oo mitir laba jibbaaran oo ku dhow agagaarka Dhismaha Dhismaha Dhismaha, waxayna lahaan doontaa 1,7 million tan oo tayada gaadiidka sanadkiiba. Si loo kordhiyo tartanka tartan ee warshadaheenna iyo inaan dalka ka dhigno saldhigga saadka ee gobolka, 21 waxaa lagu qorsheynayaa in lagu dhiso xarun sahayeed oo gaar ah. Mashaariicda mashruuca ah ee xarumaha sahayda ee xarumaha logistikada, xarumaha logistikada 7 ayaa la furay ilaa maanta iyo dhismaha, qandaraasyada iyo dib u habaynta dadka kale ayaa sii socota. Marka Turkey dhammaan adeegyada xarumaha logistics in beddesho doonaa salka logistics gobolka, qaybta saadka Turkish in 34 million tons oo ah goobaha gaadiidka dheeraad ah la 10 million mitir murabac oo meel bannaan oo u furan, meel wax lagu kaydsado, inventory weelka iyo meelaha la xalinaayo laga faa'iidi doonaa. "
Istuudiyaha Suuq Bacaha ah ee YHT
Mashruuca tareenka fudud ee Konya